အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်တတ်ချင်သလား၊ တတ်ချင်ရင်ဖတ်ပါ
Published on Friday, 28 December 2012 06:09
ဆိုလိုချင်တာက အင်္ဂလိပ်စာတတ်ချင်ရင် အင်္ဂလိပ်စာဖတ်၊ ပြင်သစ်စာတတ်ချင်ရင် ပြင်သစ်စာဖတ်ဖို့ပြောချင်တာ။ စာဖတ်တာဟာ ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို ကျွမ်းဝင်ဖို့အတွက် အများကြီး အထောက်အကူပြုနိုင်တယ်။
စာဖတ်တယ်ဆိုတာ ဦးနှောက်ကို အများကြီး အလုပ်ပေးရတယ်။ စာရေးရင် တွေးရတယ်၊ ရေးရတယ်၊ ပိုပြီး အလုပ်ရှုပ်သွားတယ်။ စာဖတ်တယ်ဆိုတာလည်း မျက်လုံးကကြည့်၊ ဦးနှောက်နဲ့ အသိဖလှယ်နိုင်မှ နားလည်ခံ စားလို့ရတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာတစ်လုံးမှ မတတ်သူက အင်္ဂလိပ်စာတွေကို ကြည့်သာကြည့်တယ် နားမလည်ရင် ဘယ်လိုမှ ခံစားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
- ခေါင်းထဲမှာ အရင်ဆုံး သူပြောတာဘာလဲဆိုပြီး မြင်ကြည့်ရတယ်
- သူပြောတဲ့အကြောင်းအရာကို သိပြီဆိုရင် ခံစားကြည့်ရတယ်
- စာရေးသူရဲ့ ရေးသားထားချက်ကို သဘောတူခြင်း မတူခြင်းတွေနဲ့ တုံ့ပြန်နိုင်ရတယ်
ဘာသာစကားတစ်ခုကို လေ့လာရာမှာ Skill လေးမျိုးစလုံးအရေးကြီးတယ်။ Listening, Speaking, Writing, Reading တွေအားလုံး အရေးကြီးတယ်။ Reading က အများကြီးအထောက်အကူပေးနိုင်တယ်။ စာဖတ်ခြင်း ကြောင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့ အကျိုးတရားတွေ အများကြီးရှိတယ်။
ဝေါဟာရတစ်ခုနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာမိတယ်
အင်္ဂလိပ်စာဖတ်ရင် စာလုံးအသစ်နဲ့ မလွဲမသွေ ကြုံရမယ်။ ဖတ်လိုက်တိုင်း အသစ်တွေချည်းဖြစ်နေရင်တော့ မဟုတ်သေးဘူး။ ဖတ်နေတဲ့ level က သိပ်မြင့်တာဖြစ်နိုင်လို့ level တစ်ခုကို ပြောင်းလိုက်သင့်တယ်။ ပိုပြီး နိမ့်တဲ့ level ကိုပြောင်းဖတ်ကြည့်မယ်။ စာတစ်မျက်နှာဖတ်လိုက်လို့ စာလုံးအသစ်အဆန်း ၅ လုံးလောက်တွေ့ တာ ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဆိုရင် အဲဒီစာကို ဆက်ဖတ်သင့်တယ်။ အဲဒီ ၅ လုံးလောက်မသိတာကို dictionary လှန်စရာမလိုဘဲ ခန့်မှန်းပြီးဖတ်သွားလို့ရတယ်။ အဓိပ္ပာယ်မသိဘဲ ခန့်မှန်းဖတ်ကြည့်ရင်းကနေ နေရာပေါင်းများ စွာမှာ အဲဒီစာလုံးကိုတွေ့လာပြီး နားလည်သွားတတ်တာလည်းရှိတယ်။
စာဖတ်ရင်းနဲ့ စာရေးဖို့ နမူနာအတွေးလေးတွေ ပေါ်လာတတ်တယ်။ ဒီလိုလေး ရေးလိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးကိုပြောတာပါ။ မတွေးနေနဲ့ လက်တွေ့ ချရေးကြည့်လိုက်ပါလား။
အင်္ဂလိပ်လိုရေးတော့မယ်ဆိုရင် သဒ္ဒါနည်းကျကျ မှန်ကန်ဖို့ အလေးထားကြတာများတယ်။ ပြောရင်တော့ သဒ္ဒါ နည်းကျဖို့ မလိုတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ဖတ်နိုင်အောင် ရေးထားတာ သဒ္ဒါနည်းကျပေမယ့် ပြောတယ်ဆိုတာက လိုရင်းတိုရှင်း နားလည်ရင်ပြီးရော ပြောလိုက်လို့ရတယ်။ ဒါကြောင့် စာဖတ်ရင်း သဒ္ဒါနည်းကျကျရေးထားတာ တွေကို လေ့လာသွားနိုင်တယ်။
စာဖတ်ရင် မြန်မြန်လည်းဖတ်နိုင်တယ်၊ နှေးနှေးလည်းဖတ်နိုင်တယ်။ မိနစ် ၃၀ နဲ့ ၁၀ မျက်နှာလောက်ဖတ်နိုင် သလို၊ တစ်မျက်နှာထဲကို တစ်နာရီလောက်ဖတ်ရင်လည်းရတယ်။ အဲဒါကို စိတ်ထဲမှာမထားနဲ့။ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှု အပေါ်မူတည်တယ်။ ကိုယ့်နှုန်းနဲ့ကိုယ်ယူပြီး ဖတ်နိုင်တယ်။
စာဖတ်တာ စိတ်ဝင်စားမှကောင်းတာ။ စိတ်ဝင်စားရင် ဖတ်ချင်မယ်၊ ပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်။ ဥပမာ ဘောလုံးအကြောင်း စိတ်ဝင်စားသူက ဘောလုံးဆောင်းပါးဖတ်သင့်တယ်။ ဘောလုံးအကြောင်းလည်းသိ၊ ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတွေလည်း သိနိုင်တယ်။
စာဖတ်နည်း ၅ ချက်
၁။ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ level ကိုရွေးချယ်ဖတ်မယ်။ များများဖတ်သည်ဖြစ်စေ၊ နည်းနည်းဖတ်သည်ဖြစ်စေ နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ စာလုံး သုံးလုံးလောက်ဖတ်လိုက် dictionary တစ်ကြိမ်ကြည့်လိုက်ဆိုရင် အာရုံနောက်တယ်။ စိတ်လည်းဝင်စားတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ နားမလည်တာများရင် စိတ်ဓာတ်ကျတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် နားလည်နိုင်တဲ့ level ကိုပဲရွေးချယ်ဖတ်သင့်တယ်။
၂။ ဝေါဟာရအသစ်အဆန်းတွေတွေ့ရင် ချရေးထားမယ်။ တစ်မျက်နှာထဲမှာ လေး၊ ငါးလုံးတွေ့နေရင် vocabulary book ဆိုပြီး သီးခြားထားမယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ရေးမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။ ဖတ်နေတုန်း dictionary ထဲမှာ မရှာနဲ့။ အလုပ်ရှုပ်တယ်။ Highlight pen နဲ့မှတ်ခဲ့မယ်။ ကျော်ဖတ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်နားလည် အောင် ကြိုးစားကြည့်မယ်။ စာအားလုံးဖတ်ပြီးမှ ကိုယ့်ယူဆချက် မှန် မမှန် dictionary မှာပြန်တိုက်ဆိုင်ကြည့် မယ်။ ပြီးတော့မှ မှတ်စုစာအုပ်ထဲ ချရေးမယ်။
၃။ စာကို ပုံမှန်ပဲဖတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်။ ဥပမာ တစ်ရက်ကို တစ်ကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်ကို အချိန်ဘယ်လောက် ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားသင့်တယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလည်း လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ တစ်ပတ်ကို တစ်ရက်၊ တစ်ရက်ကို ၂ နာရီဖတ်မယ်ဆိုတာထက်၊ တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်ကို ၁၅ မိနစ်ဆိုတာက ပိုကောင်းတယ်။ ပုံသေ သတ်မှတ်၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း အတိအကျလိုက်ဖတ်ဖို့ပဲလိုတယ်။ ဥပမာ အိပ်ယာမ၀င်မီ ၁၅ မိနစ်၊ အိပ်ယာထ ၁၅ မိနစ်၊ နေ့လည်စာစားပြီး ၁၅ မိနစ် ကြိုက်သလို သတ်မှတ်ထားနိုင် တယ်။
၄။ စာဖတ်ဖို့ အားလုံးပြင်ဆင်ပြီး အသင့်ဖြစ်မှဖတ်မယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတော့
- Highlight pen (ခက်ခဲတဲ့စာလုံးတွေအတွက်)
- စာလုံးသစ်တွေချရေးဖို့ ဘော့ပင်
၅။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲဖတ်မယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ မဂ္ဂဇင်း၊ စာအုပ်တွေကိုပဲ ရွေးဖတ်မယ်
သတင်းစာတွေမှာ နိုင်ငံခြားထုတ် အင်္ဂလိပ်သတင်းစာတွေကို ဖတ်သင့်တယ်။ သတင်းဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်။ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်နေရတာကြောင့် စိတ်ဝင်စားနိုင်တယ်။ သတင်းစာမှာလည်း intermediate နဲ့အထက် level လောက်ပဲရေးထားတတ်ကြတာများလို့ သိပ်နိမ့်ရင် ဖတ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဖတ်သင့်တဲ့ သတင်းစာတွေကတော့ ဗြိတိန်ထုတ်သတင်းစာတွေဆိုရင် The Telegraph, The Times, The Independent, The Guardian, The Financial Times (Business), The Sunday Times သတင်းစာတွေကို ဖတ်သင့်တယ်။ အမေရိကန်ထုတ် သတင်းစာတွေဆိုရင် The International Herald Tribune, The New York Times, The Wall Street Journal (Business) တွေကိုဖတ်ရင် အဆင့်အတန်းရှိရှိ အင်္ဂလိပ်စာတွေကို လေ့လာနိုင်မယ်။
ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာတိုင်းအတွက် အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာတွေရှိတယ်။ မဂ္ဂဇင်းတွေဖတ်ရင် လည်း အကြောင်းအရာလိုက်ထုတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြား မဂ္ဂဇင်းတွေကို ရွေးချယ်ဖတ်နိုင်တယ်။
စာအုပ်တွေကတော့ သမိုင်း၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ ခရီးသွား၊ ချက်နည်းပြုတ်နည်းစတဲ့ (non-fiction) စာအုပ်တွေနဲ့ ၀တ္ထု၊ ပုံပြင်၊ ဇာတ်လမ်းစတဲ့ (fiction) နှစ်လိုင်းကွဲသွားတယ်။ စာအုပ်တွေမှာ တစ်အုပ်နဲ့တစ်အုပ် လွယ်တာနဲ့ ခက်တာ တူညီမှာမဟုတ်ဘူး။ Agatha Christie က Stephen King ထက်စာရေးတာပိုလွယ်လို့ ဖတ်ရတာ လည်း သိပ်ခက်မယ်မထင်ဘူး။ သူတို့နိုင်ငံတွေက အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ဆိုင်ကြီးတွေမှာတော့ သူ့ level အလိုက် ခွဲထားတတ်တယ်။ ဒီမှာလည်း မှာနိုင်ရင်ရတယ်၊ ရှာနိုင်ရင်ရတယ်။ ဥပမာ British Council ကဖွင့်ထားတဲ့ စာကြည့်တိုက်တွေက နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာရှိတာကြောင့် အဲဒီစာကြည့်တိုက်တွေမှာ အသင်းဝင်ပြီးဖတ်ရင်လည်း ရနိုင်တယ်။
အင်္ဂလိပ်ပုံပြင်စာအုပ်တွေ၊ ၀တ္ထုတိုတွေကို စတင်ဖတ်သူတွေအနေနဲ့ ရွေးချယ်သင့်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို တော့ တိုတိုလေးတွေဖြစ်နေလို့ တစ်ပုဒ်ဖတ်ပြီးတိုင်း စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေနိုင်တယ်။ စာတစ်အုပ်လုံးဆိုရင် လည်း အချိန်တို အတွင်းပြီးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် word level ကိုတော့ 5,000 အောက်လောက်ကစဖတ်ပြီး နောက်မှ 10,000 လောက်အထိ အဆင့်ဆင့်တိုးသွားသင့်တယ်။ သူ့အဆင့်လိုက် တစ်အုပ်ဖတ်ပြီးတိုင်း စိတ်ဓာတ်အားတွေ တိုးသွားလိမ့်မယ်။ ၀တ္ထုတိုတွေကို မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာလည်း တွေ့နိုင်တယ်။ အင်တာနက်ထဲ မှာလည်း ရှာဖတ်နိုင်တယ်။
Readers ဆိုတဲ့ အဆင့်လိုက် အထူးထုတ်ထားတဲ့ အလွယ်ကူဆုံး အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေလည်း ရှိသေးတယ်။ အကြောင်းအရာတွေကို လိုရင်း၊ တိုရှင်း၊ လွယ်ကူတဲ့ vocabulary တွေနဲ့ရေးဖွဲ့ပေးထားတယ်။ Level အမျိုးမျိုး ထုတ်တာကြောင့် ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ level ကိုရွေးဖတ်နိုင်တယ်။ နာမည်ကျော်စာရေးဆရာကြီးတွေရဲ့ နာမည် ကြီးစာအုပ်တွေကို အလွယ်ဆုံးပြန်ရေးထားတာတွေလည်းရှိတယ်။ စာဖတ်လေ့ကျင့်ဖို့ အကောင်းဆုံး စာအုပ် တွေအနေနဲ့ ညွှန်းချင်ပါတယ်။
Published on Tuesday, 16 October 2012 18:11
Written by English Sharing
၁။ အင်္ဂလိပ် grammar ကို အများကြီး မလေ့လာပါနှင့်။
ဒီအချက်ဟာ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူတွေအတွက် ထူးဆန်းနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ် စကားပြောရာမှာ အရေးအကြီးဆုံး အချက်ပါပဲ။ သင်စာမေးပွဲ အောင်ဖို့ဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ် grammar ကို တတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။သို့သော် လည်း အင်္ဂလိပ် စကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောတတ်ချင်ရင်တော့ အင်္ဂလိပ်စာကို grammar မပါပဲ လေ့လာသင့်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် grammar လေ့လာခြင်းဟာ သင့်ကို နှေးကွေးစေပြီး ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။ သင်စာကြောင်းတွေကို တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ အင်္ဂလိပ် grammar rule တွေကို စဉ်းစား မိတာ မို့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ကျွန်တော်တို့က အလိုအလျှောက် ပြောတတ်ချင်တာပါ။ Native speaker တွေဟာ အင်္ဂလိပ် grammar ကို ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ တတ်ကြပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ ကျောင်းသားတွေက english grammar ကို native speaker တွေထက် ပိုတတ်ကြပါတယ်။
၂။ phrases တွေကို လေ့လာပါ။
ကျောင်းသားအများစုဟာ စကားလုံးတွေကို ကောင်းမွန်သော စာကြောင်းများ တည်ဆောက်ရာမှာ ဝေါဟာရ အများအပြားကို လေ့လာကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ကောင်းကောင်း မတည်ဆောက်နိုင်ကြပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ phrases ( အသုံးအနှုန်း) တွေကို မလေ့လာလို့ပါပဲ။ကလေးတွေ စကားသင်ယူချိန်မှာ သူတို့ဟာ စာလုံးတွေနဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို တပြိုင်နက် သင်ယူကြပါတယ်။ သင်အင်္ဂလိပ်စာလုံး ၁၀၀၀ သိရုံမျှဖြင့် မှန်ကန်သော အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းတစ်ခုကို ပြောနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။သို့သော်..phrase တစ်ခုကို သိရုံမျှဖြင့် မှန်ကန်သော စာကြောင်း၁၀၀၀ ကို သင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မှန်ကန်သော စာကြောင်း ဘယ်လောက်ပြောနိုင်လဲဆိုတာ သင်အံသြသွားပါလိမ့်မယ်။ phrases ၁၀၀၀လောက်သိရင်တော့ အင်္ဂလိပ် စကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောတတ်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် words တွေကို လေ့လာရင် phrases တွေကို တစ်ခါတည်း လေ့လာသင့်ပါတယ်။
သင် အင်္ဂလိပ် စာကြောင်းတွေကို ပြုလုပ်ရာတွင် အင်္ဂလိပ်စာလုံးတိုင်းကို mother tongue ဖြင့် ဘာသာပြန်မိပါလိမ့်မည်။ စာကြောင်း တည်ဆောက်ရာတွင် ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် english grammar rules တွေကို တွေးတောခြင်းသည်..အင်္ဂလိပ်စာ စကားပြောလေ့ကျင့်သူများအတွက် ရှောင်ရှားရမည့် အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အင်္ဂလိပ်စာ ဖတ်ခြင်း နားထောင်ခြင်း ဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ သင့်နားမှကြားသော အရာများကို ပြန်ပြောကြည့်ပါ။
ဖတ်ခြင်း ရေးခြင်း နားထောင်ခြင်းနှင့် ပြောခြင်းသည် ဘာသာစကား တိုင်းတွင် အရေးကြီးသော အချက်များဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ထဲမှာမှ စကားပြောခြင်းဟာ ပထမ လိုအပ်ချက်ပါ။ကလေးတွေလိုပါပဲ။ သူတို့ဟာ စကားပြောနိုင်ဖို့ အရင်လေ့ကျင့်ကြပါတယ်။ စကား ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောတတ်တော့မှ ဖတ်ခြင်းနဲ့ရေးခြင်းကို လေ့ကျင့်ကြပါတယ်။သဘာဝ အစီစဉ်အတိုင်းဆိုရင်တော့ နားထောင်ခြင်း ပြောခြင်း ဖတ်ခြင်းနှင့် ရေးခြင်းပါပဲ။
သို့သော် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်ကျောင်းတိုင်းတွင် ဖတ်ခြင်းဖြင့် အစပြုပြီး ရေးခြင်း နားထောင်ခြင်းနှင့် ပြောခြင်း ဖြင့် သင်ကြားနေသည်မှာ ထူးဆန်းသလို ဖြစ်မနေပေဘူးလား။ထူးဆန်းသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အဓီက အချက်ကတော့ သင်သည် ဘာသာစကားတစ်ခုကို ဒုတိယ ဘာသာစကားတစ်ခု အဖြစ် သင်ယူတဲ့နေရာမှာ အသုံးအနှုန်းတွေကို နားလည်စေဖို့ အရင်ဦးဆုံး ဖတ်ရပါလိမ့်မယ်။သဘာဝ အစီအစဉ်အရ နားထောင်ခြင်း ပြောခြင်း ဖတ်ခြင်း နှင့် ရေးခြင်းတို့ ဖြစ်သော် ငြားလည်း ဒုတိယ ဘာသာစကားအဖြစ် သင်ယူသူများအတွက် အစီအစဉ်ကတော့ ဖတ်ခြင်း နားထောင်ခြင်း ပြောခြင်းနှင့် ရေးခြင်းတို့ပါပဲ။
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူ အများအပြားဟာ အင်္ဂလိပ်စာကို ရေးနိုင်ကြပါတယ်.ဖတ်နိုင်ကြပါ တယ်။။သို့သော် အင်္ဂလိပ်စကား ကျွမ်းကျင်ဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြောတတ်ဖို့ လေ့ကျင့်ရပါလိမ့်မယ်။နားထောင်ယုံ မျှဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ သင်နားထဲတွင် ကြားသော အရာများကို ပြန်ပြော လေ့ကျင့်ပေးရပါလိမ့်မယ်။မည်သည့်အင်အား မှ စိုက်ထုတ်စရာမလိုပဲ ဦနှောက်နှင့် ပါးစပ်က အလိုအလျှောက် ပြောနိုင်ဖို့ သင့်နားမှကြားသော အရာများကို ပြန်ပြောခြင်းဖြင့် လေ့ကျင့်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ယခု အချက်ကို ပုံမှန်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း အားဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြော ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောတတ်လာပါလိမ့်မယ်။
၄။ မိမိကိုယ်ကို လွှမ်းမိုးပါ။
ဘာသာစကားတစ်ခု ပြောနိုင်ခြင်း ဟာ သင်ဘယ်လောက် smart သလဲဆိုတာနဲ့ မပတ်သက်နေပါ။ မည်သူမဆို မည်သည့်စကားကို လွတ်လပ်စွာ သင်ယူနိုင်ပါတယ်။မည်သူမဆို အနည်းဆုံး ဘာသာစကားတစ်ခု ပြောတတ်ကြပါတယ်။ သင် ညာဏ်ကာင်းကောင်း မကောင်းကောင်း ဘာသာစကားတစ်ခုတော့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ သင့် ပတ်ဝန်းကျင်မျာ အင်္ဂလိပ်စကား ကောင်းမွန်စွာ ပြောနိုင်သော သူများ ကို သတိထား ကောင်း သတိထားမိမှာပါ။ သူတို့ဟာ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ကျောင်းကနေ လေ့လာခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ သူတို့သည် အင်္ဂလိပ်စကား ကို ကောင်းမွန်စွာ ပြောနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူတို့ ရဲ့ဘေးမှာ အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတတ်သော သူများဖြင့် အဆက်မပြတ်ဝန်းရံနေကြလို့ပါပဲ။
သို့သော် အင်္ဂလိပ်စကားပြောသော နိုင်ငံများတွင် အလုပ် လုပ်နေသူများစွာ ရှိကြပါတယ်။ ထိုသူတို့သည် အင်္ဂလိပ်စကားပြောကို တတ်ကောင်းချင်မှ တတ်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ ထိုသူများသည် မိမိနိုင်ငံမှ သူများ နှင့်တွေ့ပြီး အင်္ဂလိပ်စကား ကို မပြောကြတော့ပဲနဲ့ မိမိ၏ mother tongue ကိုသာ အသုံးများသောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
သင်အင်္ဂလိပ်စကား ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောနိုင်ဖို့ ဘယ်ကိုမှ သွားစရာမလိုပါ။ သင့်ဘေးမှာ အင်္ဂလိပ် စကား ပြောတတ်သော သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်သာ လိုအပ်ပါတယ်။ အပြန်အလှန်ပြောပေးခြင်းဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြော တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။ audio lesson များ နားထောင်ခြင်းအားဖြင့် listening ကို လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ပတ်ဝန်း ကျင်ကို အနည်းငယ် ပြောင်းလဲ ပေးရုံမျှဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောကို အဆပေါင်းများစွာ တိုးတက်လာသည်ကို သင်ဂရုပြုမိမှာပါ။
၅။ မှန်ကန်သော အရာများကိုသာ လေ့လာပါ။
PRACTICE MAKES PERFECT တဲ့။မှန်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်..မှားယွင်းသော လေ့လာမှုကြီး ပြုလုပ်နေပါက မှားယွင်းသော ပြည့်စုံမှုကြီးသာ ဖြစ်နေပေလိမ့်မယ်။လူအများစုဟာ News တွေကို လေ့လာ လေ့ရှိကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ထိုအထဲမှ သုံးနှုန်းသော အသုံးအနှုန်းများသည် နိုင်ငံရေး ဆန်လေ့ရှိကြပြီး တကယ်အပြင်လောကတွင် သိပ်ပြီး အသုံး မတည့်ပေ။သူတို့ ဘာပြောလဲ ဆိုတာတော့ နားလည်ဖို့ အရေးကြီးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အခြေခံ အင်္ဂလိပ် ကို လေ့လာပြီး မှ နောက်တစ်ဆင့်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာပါ။
အင်္ဂလိပ်စကားပြောကို ဒုတိယ ဘာသာစကားအဖြစ် လေ့လာသူအချင်းချင်း အနေနဲ့ကတော့ ကောင်းလည်း ကောင်းသလို ဆိုးလည်း ဆိုးပါတယ်။ လေ့ကျင့်မှုကို အပြန်အလှန်ပေးတာတော့ ကောင်းပါတယ်။ဆိုးတာက ဘယ်ဟာက အမှန်တကယ် သုံးရမယ်..ဘယ်ဟာက အမှန်တကယ်မသုံးရဘူးလဲဆိုတာကို သင်မသိရှိပဲနဲ့ မှားယွင်းစွာ လေ့ကျင့်သော လေ့ကျင့်မှုများပါပဲ။ထို့ကြောင့် မှန်ကန်သော အရာများ စကားစုများကို မှန်ကန်သော စာအုပ်များ မှ လေ့လာသင်ယူသင့်ပေသည်။ sentences တွေကို ပြောခြင်းဖြင့် လေ့လာခြင်း မပြုသင့်ပေ။ထို့ကြောင့် သင်မှန်ကန်သည်ဟု ထင်သော အသုံးများသော စကားစုများကို သာ လေ့လာသင့်ပေသည်။
These are the rules that will help you achieve your goal of speaking English fluently.
မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Herbal Medicine Threat (English Essay)
Published on Tuesday, 30 November 2010 22:06
Experts on climate change have recently suggested that aroundaquarter of the world's land plants and animals may be wiped out in 50 years' time if something is not done to constrain the damaging effect of global warming. This is perturbing news, but climate change, with the resultant change to habitats, is not the only threat to their survival that animals and plants face. In some cases, the behaviour of human beings is imperilling their existence.
Read more: Herbal Medicine Threat (English Essay)